Tadiavo ny lolo Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Mariho ny lolo
Ny pejy fanoratana dia fotoana mahafinaritra ho an'ny ankizy isaky ny vanim-potoana. Ao amin'ny tranokalanay dia hahita fomba maro samihafa amin'ny lohahevitra samihafa. Manoritra ny soso-kevitra hanaraka ny sary.
Ampisehoy ny sary - lolo
Ao amin'ny sary iray manondro ny toetr'andro dia mampifandray ireo teboka nomerao - amin'ny filaminana marina - miaraka amin'ny penina. Amin'ny farany, misy endrika na zavaboary fanta-daza no miseho. Azo sary hosodoko ho "valisoa" ihany koa ilay sary nalaina. Ny fanitsiana ny sary dia manokatra ny môdely amin'ny format pdf.
Asio marika ny lolo-pandrosoana ho toy ny sary mihetsika
Azafady mba mifandraisa aminayRaha mitady sary sarina manokana ianao miaraka amin'ny antony manokana. Faly koa izahay mamorona ny volavolan-tenanao manokana araka ny fombanao avy amin'ny sary.
Manoritra sary ho an'ny ankizy
Ampisehoy ny sarinà sary
Ampisehoy ny sarin-dolina
Ampisehoy ny saka sary
Ampifanaraho amin'ny sary etona kely
Ampisehoy ny sarin'ny omby
Mariho ny soavaly sary
Tondroy ny vorona
Ampisehoy ny masoandro
Tadiavo ny soso-kevitra ny osy
Pejy lolo fotsy